Raadinta hogaamiye cusub oo KD kalo qaybisay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Raadinta hogaamiye cusub oo KD kalo qaybisay
La daabacay fredag 30 januari 2015 kl 14.42
Hägglund ka dib
Ebba Busch Thor iyo Göran Hägglund. Foto: Henrik Montgomery/TT
Toban sanno ka dib maalintii khamiista ayaa hogaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Goran Hägglund ku dhawaaqay in uu banaynayo xillkas. Waxyaabaha hogaamintiisa lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah in uu ku guuleystay xisbigan in uu ku hayo baarlamaanka dalka iyo kaalinta uu ku lahaa midowga xisbiyada garabka midig ee Alliansen.
Waxaan imminka la filaya in golaha sare ee xisbiga KD ka dhex dilaaco halgan ku sabsan cidda la wareegeysa xilka hogaaminta iyada oo lafilaya in halganka dhexmaro garabyo kalo gedisan oo mid mabaadiidiisu ku dhisan tahay qiimeyn konservativ ah, sida uu qabo caalinka culumta siyaasadda Magnus Hagevi.
- Hadda ka dib markii baaqaydii bariyaahan ka soo yeerayey hoganka xisbiga iyo weliba heshiiskii demcember ee ay gaareen xisbiyada mucaaradka iyo kuwo dowladda, waxyaabahas oo dhan waxay ahaayeen arrimo aan la fileynin. Balse waxuu ahaa hogaamiye intii ay socotay doorashadii 2014ka laysla dhex marayey in uu xilka ka degi doono ka dib 10 sanno oo uu xisbiga hogaaminayey. Inkstoo hogaamiyaash KD ee asaga ka horeeyey xilka hayeen waqtiyo intaas ka dheer. Sidaas daraaded ma cadeyn in uu xilka ka degi doona.
Sidaas waxa yeri Magnus Hagevi oo ah macallin culuumta siyaasadda Lennéuniversitet. Waxuu intaas raaciyey in ay tahay xilli haboon xilliga Hägglund ku soo aadiyey xil ka degiddiisa maadaama ay meesha ka baxday qatartii aheyd in doorasho dheeraad dalka ka dhacdo, taas oo u furtay albaad xilka kaga degi karo isaga oo aan wax dhaawac ah u soo jiidin xisbiga.
Magnus Hagevi ayaa sheegay Göran Hägglund uu ahaa hogaamiye la wada jecel yahay, waxyaaha lagu xasuusan doonana waxaa ka mid noqon doonta sida uu ugu guuleystay ku heynta xisbiga KD baarlaamanka iyo kaalinta uu ku dhex lahaa xisbiyada ku midoobay Alliansen. Marka ayse timaado arrimaha siyaasadda wey ka adag tahay in la helo wax lagu xasuusto Hägglund ayuu yeri Hagevi. Dadka dhaleeceysanaa hogaaminta Hägglund waxay ku eedeeyan ayuu yeri in uu ka dhigay siyaasadda xisbiga Kristdemokraterna mid aan cadeyn.
Magnus Hagevi ayaa qaba in hadda ay ka dhex billaabaneyso xisbiga dagaal ku sabsan cidda noqonaysa hogaamiyaha xisbiga, dagaalka oo u dhaxeyn doona garab u dhow hogaamiyaha hadda xilka ka degaya iyo weliba garab kale oo mabaadiisa konservativ fog ku dhisan tahay. Tusaale ahaan xoghaya xisbiga Acko Ankerberg Johansson iyo wasiirkii hore ee guriyeynta Stefan Attefall iyo Emma Henrikssson oo ah xildhibaadan ayaa ka socda garab aan kiiniisadaha lug ku laheyn una dhawaa hogaamiayaha xillka baneeyey. Halka garab ay ku jiraan horjeeda Ebba Busch Thor oo xildhibaan ka tirsan golaha deeganka Upsala. Iyo Weliba Larsa Aduktisson oo xisbiga ugu jira baarlamaanka EU ayagana la filaya in ay xilkan u tartamaan. Labadaan danbe ayaa ka tirsan garab mabaadiisu tahay konservativ fog. Tusaale Eba Bush Thor ayaa ka soojeeda qolyaha diinta masiixiyadda ku adaga ee livetsord.
Kooxda Konservativka fog ayaa horey ugu qabsatay xilka hoogaaminta Goran Hägglund balse ku guuldaraystay. Haddase oo xilku banaanaaday way adag tahay in la sii saadaaliya cidda ay guulsha raaci doonto sida uu yeri Magnus Hagevi.
- Hadda way yaro adag tahay in la sii saadaaliyo maadaa xisbiga dhexdiisa ay ka socoto isbadel- laakiin ka dib markii xisbiga soo bandhigay hindiseyaal siyaasadeed oo lagu yareynayo qaabilaada qaxotiga waxaa xoogeysatay kaalinta ay xisbiga ku dhex leeyahiin garabka aadka konservetiv-ka u ah. Taas waxay saameyn ku yeelan karta cidda noqoneysa hogaamiyaha xisbiga, ayuu yeri.